U-Alla Sigalova: ubomi bomntu, i-biography. Umyeni nabantwana baka-Alla Sigalova, ifoto
U-Alla Sigalova ungumculi-chore osebenza kwiintlobo ezahlukeneyo. Ubungqina obubukumkani kunye nomntu oqingqileyo walo mfazi onobuhle, ontlekayo, onothando onokuthandana naye unokuthetha ngokunyaniseka komoya kunye nentando yokuphumelela. Ingozi eyenzeka ebomini uAlla oneminyaka eli-19 ubudala, yaphoqeleka loo ntombazana ukuba ihambe kwibhaltshi yeklastiki, eyayiseneminyaka emithandathu. I-Sigalova yayingaphantsi kweemeko kwaye yaba ngumculi we-choreographer, umdlali we-actress, umlawuli, umbonisi weTV, umlawuli wezemidlalo kunye nokuba nguprofesa kwi-Moscow Art Theater Studio. Ubomi bomntu u-Alla Sigalova obonwabisayo kubalandeli bakhe, abafazi abanjalo abanqabileyo bahlala bebangela ukwazi ukwazi impilo.
Biography ka-Alla Sigalova
Inkwenkwezi yekamva yazalelwa eVolgograd ngoFebruwari 1959, emva kweenyanga ezimbalwa emva kokuba kuzalwe intsapho yentsapho yafudukela eLeningrad. Le sixeko yaba yindawo yakubo. Umama - udansa odumeleyo - wabonisa intombi ubuhle beballet yesilasi. Ukususela kwiminyaka emithandathu ubudala, u-Alla wafunda ukudanisa kwiingoma zomzali wakhe wepiyano. Idatha yakhe yobugcisa imangalise bonke ootitshala. Nangona kunjalo, uSagalova wangena kwisikolo saseVaganovsk kuphela ngokudibanisa kwabazali.
Le ntombazana yayinomdla wokudanisa, kwaye bonke ootitshala be-academy babeqinisekile ukuba bakhulula inkwenkwezi ezayo ye-ballet, eyayiyonqoba iindawo ezidumile zehlabathi. Kodwa isigwebo sichazwe ngenye indlela: ingozi enkulu kumatshini wavala ibhaltshi yeklastiki ku-Alla, kodwa yavula ezinye iindlela.
Ukunika amandla kunye nobuchule
Kwiinyanga ezintandathu emva kokulimala, uSagalova wasebenzisa kwikliniki, elala. Emva koko unyaka wonke wafunda ukuhamba ngokutsha kwaye uhlala nje. Kuxinzelelo olunzulu, i-ex-ballerina kwafuneka ikhuphe. Isisombululo esifanelekileyo sokuqala isahluko esitsha ebomini.
Ngoko wenza, kwaye emva kweminyaka emine, waphumelela ngokugqithiseleyo kwisebe le-GITIS. Kwaye kwangoko, u-Alla Sigalova wahamba ngokukhawuleza. U-Alla oqeqeshwe abaqeqeshiweyo kwi-academy yezemidlalo, eyenziwa, wenza iqela elizimeleyo, wathwala i-theatre, wenza iinkqubo zeTV eRussia kunye neenkwenkwezi ezine kwiifilimu. Nantoni na into ebhinqileyo, wayezinikele ekupheleni kwaye ngokuqinisekileyo waphumelela impumelelo.
KwiSagalova, ubomi bomntu bubalulekileyo
U-Alla ukholelwa ukuba akukho nto ibaluleke ngaphezu kobomi bomntu, umsebenzi ophumeleleyo kakhulu awuyi kufaka indawo yokufudumala komfazi. Umfazi oyinyaniso uzimisele ngokuthanda. Yaye yonke into eyenziwa nguSigalova yile nto - akukho nto ibaluleke ngaphezu kwekhono lomfazi lokunika le ntliziyo emangalisayo.
Ngo-1981, ngomnyaka wesibini weyunivesiti, u-Alla watshata, kwaye emva koko wayenentombi uAna. Kungekudala, u-Alla wahlukanisa nomyeni wakhe, kwaye emva kweminyaka emininzi wayivuma ngokuxoxwa naye ukuba wayebuhlungu gqitha ukuba intombi yakhe yayingenakuhlala kunye noyise. Intsapho epheleleyo isiqinisekiso sokukhuliswa kakuhle kwabantwana.
U-Alla Sigalova kunye no-Kozak waseRoma-lonwabo ngokupheleleyo
Okwesibini, u-Alla Sigalova watshata nje iminyaka engama-36 ubudala. Ukhethiweyo wakhe wayeyindoda ephawulekayo - umlawuli weelente waseRoma uKozak. Umtshato oqolileyo owenziwe ngumtshato wanikela umfazi othile ulonwabo ngokwenene. U-Alla wancenga umyeni wakhe waza wamhlonela kakhulu. Uvuyayo kukuba i-fate yamthumelela njengomntu onamandla, ophumelelayo, onokuzithemba, ohlakaniphile novuyo. "Ngaphandle koko, ndibe ndingatshatanga," uSagalova wavuma. Eli bhinqa lalixabisa yonke iminithi eyayichithwa nomyeni wayo. Baye bathetha iiyure, kwaye babehlala benomdla komnye nomnye. UmRoma wayejonga njengomfazi umntu omangalisayo: walala waza wavuka ngobuso, kwaye iminyaka eyi-16 yobomi bentsapho wamangaliswa yile ngxaki "yokuba ngumntu onenhlanhla." Ngo-2010, emva kokugula okude, u-Roman Kozak wadlula.
Abantwana baka-Alla Sigalova
Intombi ka-Anna kunye noMyana kaMikhail, owazalwa emtshatweni noKozak, - U-Alla ubona impumelelo enkulu kunye nobutyebi ebomini bakhe. Ubona umsebenzi wakhe ekukhuliseni abantwana njengothando olungenamkhawulo kubo. Intombi ayizange ilandele emanyathelweni omama odumileyo, waba ngumyili wezinto zangaphakathi ophumelelayo. UMichael ufunda kwi-journalism kunye namaphupha okuba ngumnyathelisi odumileyo.
Italente ibe ngumfazi
Ngokusebenzisa izixhobo zemfundo eqinile, imilinganiselo ephakamileyo kunye namandla amakhulu eSigalova, akunakwenzeka ukuba ungaboni umxhwele ozalwa ngowona mfazi. Kwaye kungakhathaliseki ukuba imdala kangakanani, uya kuhlala enomdla kumadoda. Kulo mama wesimangalisa unako ukufumana yonke imvakalelo, kodwa phakathi kwabo kuya kuba neyodwa - ukungakhathaleli. Unomtsalane kunye nobungqingili bakhe bangaphandle, emva kwezinto ezithambileyo zabasetyhini. Umlilo wakhe kunye neetalente kumangalisa abalandeli. Unjalo -Alla Sigalova, obomi bakhe bufanelwe ukunyamekela.
Umfazi kaSergey Shnurov: iimfihlelo zeMatilda elicucileyo (Iifoto ezininzi zabantwana beCord)
Steven vareniki nge-turn
Indlela yokufundisa umntwana ukusela kwendebe?
Maffin e Mexican